နအဖ၏ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » နအဖ၏ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ (၃)
နအဖ၏ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ (၃)
Posted by ႏြယ္ပင္ on Feb 23, 2011 in Myanma News, News, Politics, Issues | 8 comments
စစ်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတွေထဲက ဖျောက်ဆိပ်ပင် ရေဒါစခန်း မြင်ကွင်းပုံတွေပါ…။ ဒီလိုလူသူမရောက်တဲ့ တောင်ကြို၊ တောင်ကြားတွေထဲမှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ကုန်ကျစားရိတ် အင်မတန်များပြားသလို၊ မီးအပြတ်မခံတဲ့ အဆိုပါ စက်ရုံတွေ အတွက်လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း တာဝါတိုင်တွေကနေ ပို့လွှတ်ပေးပါတယ်..။ လက်ရှိ စစ်အစိုးရ ပြည်သူလူထုအတွက် ဆောက်လုပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ ပြည်တွင်းက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်းတွေဟာ အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ ပြည်သူလူထု အတွက်လား ဒါမှမဟုတ်.. အဆိုပါ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတွေ အတွက်လား ဆိုတာ စဉ်းစားချင့်ချိန်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်..။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏအများအပြားကို ဒီလို ပြည်သူလူထုမသိနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်း နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနေရပါတယ်..။ ဒီလိုလျှို့ဝှက် တည်ဆောက်ရေး တစ်ခုစီမှာ အစိတ်အပိုင်းထုတ်တဲ့ စက်ရုံပေါင်း အနည်းဆုံး ၂ဝကျော်မှ တစ်ချို့စီမံကိန်းတွေမှာ ဆိုရင် အများဆုံး စက်ရုံ ၉ဝလောက်အထိရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလို စီမံကိန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မီဂါဝပ်များစွာ ခွဲဝေအသုံးပြု နေရပါတယ်…။ ထို့အတွက်ကြောင် မြန်မာပြည် အတိုင်းအတာ အသာထား ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာတောင် မီးအပြည့်အဝ မပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်..။
ဆောက်လုပ်ပြီးစ စက်ရုံ အဆောက်အဦး တစ်ခုမြင်ကွင်း
ဆောက်လုပ်ပြီးစ ရေဒါစက်ရုံမြင်ကွင်းတစ်ချို့.. လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းအတွင်းမှ အဆောက်အဦးများဟာ တောင်ကြား တွေမှာ တည်ဆောက်ထားပြီး လေယာဉ်ပေါ်မှ ကြည့်လျှင် ရုတ်တရက် မမြင်နိုင်စေရန်.. အစိမ်းရောင်ဖြင့် သုတ်ထားပါတယ်..
ဖျောက်ဆိပ်ပင် တောင်ကြောအတွင်းမှ စက်ရုံတစ်ရုံပုံပါ..။ မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင် တော်တော်များများဟာ ဒီလို စက်ရုံဂိုဒေါင်တွေထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း နေထိုင်ကြပါတယ်..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ
အယ် မြင်ရပါတယ် .. နွယ်ပင့်ဆီမှာတော့ …လိုင်းမကောင်းလို့ထင်တယ် . သေချာကြည့်ပါဦး
တို့ လဲ တူတူပဲ မြင်ရဘူး။လိုင်း ကောင်းပုံတော့ တနေ့လုံး ခုညနေ မှ log in လို့ ရတယ်။
မြင်ရပါတယ်။ အဖြူရောင်ချည်းပဲ…။ နောက်တာ ဘာမှမမြင်ရဘူး..ပြန်တင်ပါဦး..။
ဟိုပုံပြင်ထဲကလို သီလ၊သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဘဲ မြင်ရမယ်၊သီလမရှိတဲ့သူတွေမမြင်ရဘူးထင်တယ်
…..အင်း ………….အဖြူလေးဘဲံဗျ ၊
ဒီလောက်သမာဓိရှိတာတောင် ဘာဖြစ်လို့ မမြင်ရတာလဲမသိဘူး
အပေါ်ကကြည့်ရင်မမြင်ရအောင်အစိမ်းရောင်သုတ်ထားပါတယ်ဆို မှ ဘယ်မြင်ရတော့မလဲ…ဟီး….:)